🥇 accounting emsebenzini ekude
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 728
Ividiyo ye-accounting emsebenzini okude
Myalelo we-accounting emsebenzini okude
Ukuthathela ingqalelo umqeshwa ngamnye xa esebenza kude kubaluleke kakhulu okwangoku, xa kujongwa imeko yehlabathi, ukudodobala kwezoqoqosho, kunye notshintsho lomsebenzi osemgama. Ukwenza ingxelo ngomsebenzi okude kufuneka kurekhode elona xesha lililo lisetyenzisiweyo, umgangatho wemisebenzi, kunye nevolumu. Ulawulo lokuphendula kwimisebenzi ekude alunzima, kunye nekomkhulu elincinci labasebenzi, kodwa xa kufikwa kwinani labasebenzi abanokuthi benze imisebenzi eyongezelelweyo ngaphandle komsebenzi, kunzima kwaye kuyingozi. Ulawulo olude lomsebenzi kwikhompyuter luvumela ukubona imisebenzi yabasebenzi mihla le, ukuhlalutya inani leeyure ezichithwe kunye nomgangatho kunye nomthamo wemisebenzi eyenziweyo, kodwa xa kungekho software ekhethekileyo, kunzima ukuhlalutya ilizwe ngokubanzi yemicimbi. Sebenzisa ithuba lethu elikhethekileyo neligqibeleleyo lenkqubo yeSoftware ye-USU, enceda kungekuphela kwinxalenye yemveliso yokuphunyezwa kwemisebenzi ethile. Ikwanyusa iiyure zomsebenzi kude, ibeke esweni umsebenzi wabasebenzi ngalo lonke ixesha, ibeka iingxelo kunye nemizobo, ibonakalisa iphaneli yomsebenzi kwikhompyuter yomntu ophantsi, ngohlobo lwefestile evela ekubekeni esweni ikhamera yokujonga ividiyo. Umphathi uyakwazi ukubeka iliso kwimisebenzi ekude yabasebenzi, ngokungathi wonke umntu use-ofisini, ehlalutya inkqubela phambili kunye nomgangatho wentsebenzo eyenziweyo, eskrolela umgca wexesha lomsebenzi owenziwayo, ukubona umsebenzi kunye nokuzola, ehlalutya uhlobo lwempazamo kuba Umsebenzi angangena kwinkqubo ngaphandle kokucima ikhompyuter, anike ukuqonda ukuba uyasebenza, kodwa eneneni enze imicimbi yakhe yobuqu. Inkqubo yolawulo lokunikwa kwengxelo ibonelela ngomsebenzi omnye okude kubo bonke abasebenzi, kwimowudi yemisebenzi emininzi, ukubonelela ngokungena kunye nokwenza imisebenzi eyabelweyo, ngaphandle kokungaphumeleli kokusebenzisa, usebenzisa iakhawunti yakho, ukungena ngemvume kunye negama lokugqitha. Kulawulo lobalo-mali, kucingelwa ukwahlula amalungelo abasebenzisi ngokusekwe kwimisebenzi yabasebenzisi, ukukhusela ulwazi olugcinwe kwinkqubo yolwazi emanyeneyo. Fumana izixhobo zomsebenzi ofunekayo osekude, ofumanekayo uthathela ingqalelo ukusetyenziswa kweinjini yokukhangela imeko, ukunciphisa ixesha lokukhangela kwimizuzu embalwa. Ukufaka ulwazi kuyafumaneka ngokuzenzekelayo okanye ngesandla, ngokokubona kwabasebenzi, besebenzisa imithombo eyahlukeneyo kunye nenkxaso, phantse zonke iifomathi zeMicrosoft Office Word okanye amaxwebhu e-Excel. Ulawulo lokuphathwa kwexesha elikude labasebenzi lwenziwa ngokuzenzekelayo, kubalwa inani elichanekileyo leeyure kunye nomsebenzi owenziweyo, kuhlalutywa inkqubela phambili, ukuthelekisa iigrafu, kunye nokubala imivuzo ngokusekwe kolu fundo. Yonke idatha evela kwiikhompyuter zabasebenzi mayithunyelwe kwinkqubo yobalo, ukupicothwa kunye nokulawulwa kokufundwa komsebenzi owenziweyo ukude, ukurekhoda abasebenzisi abasebenzayo kunye nabangasebenziyo, ukumakisha ngemibala eyahlukeneyo, echonga uhlobo lwempazamo, ukungasebenzi kakuhle kwe-Intanethi okanye ukungabikho komsebenzisi ngokwakhe. Ngokubala imivuzo esekwe kubungqina, abasebenzi abayichithi ngokunyusa umgangatho kunye nomthamo wemisebenzi ekude, echaphazela ngokuthe ngqo imeko yombutho.
Ukutshintshela emsebenzini okude bekuyinto eguqukayo, kodwa ngenkqubo yethu akukho mahluko ubonakalayo, kuba yonke imisebenzi yenziwa ngendlela efanayo nangcono, kuthathelwa ingqalelo ukulawulwa kwemali rhoqo, uhlalutyo kunye nolawulo. Ziqhelanise nolawulo lobalo mali kunye nolawulo ngokufaka ingxelo yethu yasimahla. Iingcali zethu ziya kukunceda ukuba ucebise ngayo yonke imiba, oya kuthi ukwazise kulawulo lobalo lwemisebenzi ekude kwaye akuncede uqwalasele inkqubo kuzo zonke iikhompyuter.
Isoftware ezenzekelayo inokulungela imisebenzi yolawulo kunye nokwenza ingxelo ngomsebenzi okude kuwo nawuphi na umbutho.
Inani leekhompyuter eliqhagamshelelweyo alilinganiswanga, ngenxa yefomathi yeendlela ezininzi zemisebenzi ekude nokulungelelanisiweyo. Umsebenzi ngamnye unikwa igama lokungena kunye negama lokugqitha. Ukunikezelwa kwamalungelo okusetyenziswa kusekelwe kwimisebenzi yeengcali, ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nomgangatho wolwazi olukhoyo. Xa ixhaswa, izixhobo zihlala zikhuselekile kwaye zingatshintshi ixesha elide. Xa ungene ngemvume, idatha efakwe kwiigodo zomsebenzi ngamnye, kunye nokuphuma, ukungabikho kunye nekhefu lesidlo sasemini. Ukucwangciswa kwemisitho eyahlukeneyo kunye nokwakhiwa kweeshedyuli zomsebenzi kwenziwa ngokuzenzekelayo. Inani elingenamda leekhompyuter ziyafumaneka ukudibanisa.
Abasebenzi bayakwazi ukubona imisebenzi ecwangcisiweyo, benokufikelela kumcwangcisi womsebenzi, ukurekhoda imeko yokusebenza okude okugqityiweyo. Inkxaso phantse kuzo zonke iifomathi zamaxwebhu kaMicrosoft Office kwikhompyuter. Yonke imisebenzi yekhompyuter iyazenzekela. Ukuseta indawo eluncedo kunye nendawo yokusebenza kubonelelwa kumqeshwa ngamnye ngokukodwa. Ukuhambisa izinto kuyafumaneka ngesandla okanye ngokuzenzekelayo. Ukungenisa idatha kuyafumaneka kwimithombo eyahlukeneyo. Fumana idatha efumanekayo, uthathela ingqalelo ukusetyenziswa kweinjini yokukhangela kwimeko. Abasebenzisi banokusebenza kwiikhompyuter okanye kwizixhobo eziphathwayo. Ivenkile iyafumaneka kwimithamo engenamda. Khetha ulwimi olufunekayo lwangaphandle kunye neemodyuli. Ukudityaniswa kwezixhobo ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa, kunye nolawulo kuyo yonke intshukumo yemali, ukudityaniswa kwenkqubo yeUSU Software nayo iyayixhasa. Isakhono sokwenza ngokwezifiso kunye nokuphuhlisa uyilo lwe logo. Kuxhomekeke kwinani labasebenzisi, indawo yolawulo yomphathi iya kutshintsha. Ukugcina isiseko solwazi esimanyeneyo esinolwazi olupheleleyo kunye namaxwebhu. Ngokusebenzisa ingxelo yohlalutyo kunye neenkcukacha-manani, umphathi uyakwazi ukuhlalutya imisebenzi yeshishini, abone ukukhula kunye nokwehla.